Fonenana tra-doza :: Telo mianaka maty nirodanan’ny trano • AoRaha
Fonenana tra-doza Telo mianaka maty nirodanan’ny trano
Niharam-boina noho ny fihotsahan’ny trano ny fianakaviana iray teny Antoby Mamory Ivato, tamin’ny alin’ny alakamisy 30 desambra 2021. Niara-namoy ny ainy vokatry ny loza ny vehivavy telo: mpianaka sy havan’izy ireo iray akaiky ihany. Tsy atahorana kosa ny toepahasalaman’ny olona hafa naratra nandritra an’ity voina ity.
Vokatry ny orambe nivatravatra, tamin’iny faran’ny herinandro iny, indrindra tamin’ny alakamisy alina, izao fahavoazana nihatra tamin’ny fianakaviana iray izao. Tsy nanampo ny zava-doza mety hiseho ireo mpihavana vory maro tao amin’ilay trano.
“Niara-nifety sy nisotrosotro izahay fito mianaka. Naheno zavatra nidoboka mafy izahay, tokony ho ora iray taty aoriana. Nirodana ny trano. Niezaka niantso vonjy sady nivoaka nanavotra aina izahay rehefa nahatazana hazavana kely. Teo akaiky teo ny zazavavy kely, telo taona, efa tsy nahatsiaro tena sy nihoson-dra voatsindrin’ny vato sy vy”, araka ny fitantaran’ireo niharam-boina izay tafavoaka velona. Trano an-dalampanamboarana misy rihana roa ity nirodana tamin’ny trano nisy an’ireto fianakaviana tra-doza ity. Niezaka namonjy azy ireo, tamin’ny alalan’ny fisokirana an’ireo voatsindrin’ny vato sy biriky ny mpiara-monina teny an-toerana. Nanampy tamin’ny famonjena ihany koa ireo mpitandro filaminana sy ny sampana mpamonjy voina. Ora vitsy taty aoriana, voasikotra tsirairay ireo razana.
Halatra taova :: Roa lahy nahatrarana voamaso efatra
Vinam-pampandrosoana hoan’ny 2022 :: Hanamafy kokoa ny hafainganam-pandehany i Andry Rajoelina